Sweden oo soo dhaweysay geerida Usama Bin Laden | Somaliska
Wasiirka arimaha dibada Sweden Carl Bildt ayaa soo dhaweeyay dhimashada Usama Bin Laden oo Maraykanku ay sheegeen in ay shalay ku dileen Pakistan. "Aduun uusan Usama ku nooleyn iyo neceybka uu faafinjiray in ay tahay aduunyo wanaagsan shaki kuma jiro" ayuu yiri Carl Bildt. Madaxweynaha maraynka Barack Obama ayaa xalay ku dhawaaqay geerida Bin Laden isagoo sheegay in ciidamo gaar ah oo maraykanka leeyahay ay shalay ku weerareen guri uu ku dhuumaayleysanayay oo ku yaala magaalo u dhow caasimaha Pakistan ee Islamabadan. Si kastaba ha ahaatee quburada waxa loogu yeero argagixisada ayaa ka digay in geerida Bin Laden aysan macnaheeda ahayn in ururka Al Qacida la soo afjaray. Sweden ayaa qayb ka ah ololaha looga soo horjeedo ururka AlQacida iyo Taliban ee ka socda Afghanistan iyadoo ay ka joogaan 500 askari. Bishii December ee la soo dhaafay ayaa baarlamaanka Sweden u codeeyay in la siyaadiyo tirada ciidama Sweden ee jooga Afghanistan.
Wasiirka arimaha dibada Sweden Carl Bildt ayaa soo dhaweeyay dhimashada Usama Bin Laden oo Maraykanku ay sheegeen in ay shalay ku dileen Pakistan. “Aduun uusan Usama ku nooleyn iyo neceybka uu faafinjiray in ay tahay aduunyo wanaagsan shaki kuma jiro” ayuu yiri Carl Bildt.
Madaxweynaha maraynka Barack Obama ayaa xalay ku dhawaaqay geerida Bin Laden isagoo sheegay in ciidamo gaar ah oo maraykanka leeyahay ay shalay ku weerareen guri uu ku dhuumaayleysanayay oo ku yaala magaalo u dhow caasimaha Pakistan ee Islamabadan.
Si kastaba ha ahaatee quburada waxa loogu yeero argagixisada ayaa ka digay in geerida Bin Laden aysan macnaheeda ahayn in ururka Al Qacida la soo afjaray.
Sweden ayaa qayb ka ah ololaha looga soo horjeedo ururka AlQacida iyo Taliban ee ka socda Afghanistan iyadoo ay ka joogaan 500 askari. Bishii December ee la soo dhaafay ayaa baarlamaanka Sweden u codeeyay in la siyaadiyo tirada ciidama Sweden ee jooga Afghanistan.
Maraykanka iyo Sweden oo heshiis ku gaaray wadaaga kaydka faraha
Lol.. arin kaani waa wax lagu qoslo geesigii islaam ka hadii uu dhin tay aduun yadaani dhib keeda iyo wareer keedaba wuukatagay alx amar kii alle na wuu fuliyay osama bin ladin alle ha u naxariisto hadii uu dhin tay waxaan u maleey naa sh. osama in ey wali xayaatadiisa baaqi kutahay allow cadoowgaaga jabi insha allah
to abdulahi sxb sheekhu ma dhiman e wu shahiiday
c rashiid says:
ma filayo in geerida ay sheegayaan wax ka jirto
waa beenayaal fulayiin ah,way cadeyn lahayen haday hubaan inay sheekha dileen
May 2, 2011 at 19:53
bismilahi ugu horeynta 2 alle ha uu naxaristo hadey run tahay ile nin waliba maaliin ayuu le yahay geridana waa wax xaqa wixii bena mar unba ayeey soo bexeysa
Magacaaga...dalmar foodeey says:
May 3, 2011 at 17:55
a s c. Walal shiiqu ma dhiman wa. Shahiid